सांसद पद चैट : तिल्मिलाएर फेसबुकमा प्रभु साहको बिलौना ! - Kantipath.com
सांसद पद चैट : तिल्मिलाएर फेसबुकमा प्रभु साहको बिलौना !
खड्ग ओली सरकारका सहरी विकासमन्त्री एवं ओली समूहका नेता प्रभु साहले प्रचण्डमाथि कडा आक्रोश पोख्दै बिलाैना गरेका छन् । माओवादीका तर्फबाट सांसद जितेका र माओवादीकै तर्फबाट पटक–पटक मन्त्री बनेका साह पछिल्लो समय माओवादी केन्द्र त्यागेर एमालेको ओली समूहमा प्रवेश गरेका थिए । पार्टी परित्याग गर्ने प्रतिनिधिसभाका चार सदस्यको पार्टी सदस्यता खारेज गर्दै सांसद पदबाट समेत हटाउन माओवादी केन्द्रले मंगलबार पत्राचार गरेपछि साह तिल्मिलाएका हुन् ।
Previous Previous post: ७९ सहसचिवको एकैपटक सरुवा : को कहाँ ? (सुचिसहित)
Next Next post: माओवादीका दुई मन्त्रीले सरकार छाड्दै